အဘိုးတို့ရေ…. အဘိုးတို့ရယူပေးခဲ့တဲ့ လွ ပ်လပ်ရေးကြီး… | ဥက္ကာကိုကို
အဘိုးတို့ရေ…. အဘိုးတို့ရယူပေးခဲ့တဲ့ လွ ပ်လပ်ရေးကြီး…
Posted by oakkarkoko on July 18, 2011
အသီးတွေသီး.. အပွင့်တွေ ပွင့်လို့…
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပြန်လည် ခူးဆွတ်စားသောက်လို့။အဘိုးတို့ရေ….
လွပ်လပ်ရေး အကိုင်းအခက်တွေက သီးကြ ပွင့်ကြပေမယ့်
ပြည်သူအများစုကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ချစ်ကြတယ် အဘိုးတို့ရဲ့
ကျနော်တို့တတွေ အချင်းချင်းလည်း မတည့်ကြပေဘူး။အဘိုးတို့မွေးခဲ့တဲ့ မျောက်တွေ
ခြောက်လုံး လှန့်လုံး မက်လုံးတွေကြားမှာ
ပြည်သူတွေလည်း ဟောတစ်ယောက် ဟောတစ်ယောက်
မျောက်… မျောက်… မျောက်တွေ ဖြစ်သွားကြကုန်ပါရောလား။
တစ်ရွက်ပြီး တစ်ရွက် ပျောက်ကွယ်စပြုနေပြီလေ
“အဲဒါ.. ဘယ်သူတွေလဲဟင်”လို့ ပြန်မေးကြတဲ့ကလေးလေးတွေ
အဘိုးတို့ရဲ့ သမိုင်းရုပ်ပုံလွှာကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားသူဟာ
ကျနော်တို့တွေ သိပ်သတိရတာပဲ အဘိုးတို့ရေ…..
ကောင်းမွန်တဲ့ လူ့ဘောင်တစ်ခေတ်ကို ထူထောင်နေကြမှာပဲနော်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ထဲ ခပ်ကုပ်ကုပ်ပဲ ချီတက်နေကြရရှာတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှ မသနားရင် ဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှ သနားမှာမဟုတ်ဘူးအဘိုးတို့ရေ
ကျနော်တို့ရောက်နေတာ အဘိုးတို့မမြင်ဖူးတဲ့ ခေတ်ဆိုးလေ။
ကျနော်တို့ လျှောက်နေတာ ခေတ်ဆိုးလမ်းမ
ကျနော်တို့ ဖြတ်နေတာ ခေတ်ဆိုးတံတား
ကျနော်တို့ စားနေတာ ခေတ်ဆိုးထမင်း
ကျနော်တို့ သောက်နေတာ ခေတ်ဆိုးရေပုပ်
ကျနော်တို့ ရှုနေတာ ခေတ်ဆိုးလေညစ်
ကျနော်တို့ လုပ်နေတာ ခေတ်ဆိုးအလုပ်
ကျနော်တို့ တွေးနေတာ ခေတ်ဆိုးအတွေး
အဘိုးတို့ မြေးလေးတွေ ခေတ်သစ်နဲ့ ဝေးနေတာ ကြာပြီကော။
နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ရဲ့
မိုးကလေးတွေ တဖြောက်ဖြောက် တဖွဲဖွဲ ရွာနေဆဲပါ
ယူကြုံးမရ တမ်းတမှုတွေ တဖွဲဖွဲပါ။
နေ ကြ ပေ တော့ တာ။
You received this message because ဥက္ကာ ကိုကို shared it with . Unsubscribe from these emails.
သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံတော့မည့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း →